1. What is Power BI | Myanmar Online School
Microsoft Power BI - Professional Course
1. What is Power BI (12:27)
2.Course Outline (6:25)
3.Power BI Installation (3:36)
4.Quick Overview of Power BI-1 of3(8:33)
5.Quick Overview of Power BI-2 of 3_Working in the Query Editor (7:57)
6.Quick Overview of Power BI-3 of 3_The Data View and Create our First Visual (6:56)
7.How to get the most out of this course (6:30)
2.Getting started with Power BI Desktop
1.Module Overview (3:00)
2.How to use the attached project files (6:20)
3.Understanding PowerBI Workflow (3:57)
4.Exploring the interface of the Data Model (7:58)
5.Understanding the Query Editor Interface (5:44)
6.Important Creating the Project file and Recommended Settings (5:00)
3.Working in the Query Editor
1.Module Overview (1:41)
2.Linking to Source Files (7:26)
3.Keeping and Removing Rows (15:05)
4.Working with Filters (4:01)
5.Removing Empty Rows (5:06)
6.Saving the Project Draft (3:22)
7.Appending Queries (6:06)
8.Working with Columns (5:04)
9.Replacing Values (6:54)
10.Formatting Data and Handling Format errors (9:38)
11.Pivoting and Unpivoting Data (8:12)
12.Splitting Columns (6:52)
13.Creating Groups and Cleaning Up our project (3:25)
1.Import Data from CSV file (8:08)
2.Basic Data Modeling in Power Query (7:19)
3.Building Second Report inaquick way (9:39)
5.Filter to extract more details (13:45)
7.Exploring our second BI report (6:32)
6.Case Study-2_Sport Analytics
1.Data Cleaning in Query Editor (26:22)
2.Data Modeling Merge Queries and Column Profiling (21:47)
3.Cleaning blank rows for Data integrity (5:25)
4.Additional Explanation about JOIN and Enable Load (5:07)
1. What is Power BI
PowerBI ဆိုတာ ဘာလဲ။
ဒီအတန်းက အခြေခံလေ့လာသူတွေအတွက် ရည်ရွယ်တာကြောင့် Power BI ဘာလဲဆိုတာကို ရှင်းပြရင်း စလိုက်ရအောင်။ Power BIဆိုတာ software တခုသက်သက်မဟုတ်ပါဘူး၊ဒေတာတွေကို modelingဆောက်ဖို့၊analyze လုပ်ဖို့၊ visualize လုပ်ဖို့အတွက် Microsoft ကနေ ဖန်တီးပေးထားတဲ့ software service အစုအပေါင်းကြီးတခု ဖြစ်ပါတယ်။
Data modeling အကြောင်းကို ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင် database တခုထဲမှာ သိမ်းဆည်းဖို့ အတွက် data တွေကို ပြင်ဆင်ဖို့၊စုစည်းပေးဖို့ လုပ်တဲ့ process အကြောင်းကိုလည်း ထည့်ပြောရပါမယ်။ ဒီ processထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ မလိုအပ်တဲ့ row တွေကို filter out လုပ်တာ၊ မလိုအပ်တဲ့(သို့)ထပ်ခါထပ်ခါ ပါနေတဲ့ data column တွေကို ဖယ်ရှားပစ်တာ၊ တသတ်မတ်တည်း ဖြစ်မနေတဲ့(သို့)အရည်အသွေးနိမ်တဲ့ ဒေတာတွေကို ရှင်းလင်းတာ၊ ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ ဒေတာတွေကို လုံးဝ restructure လုပ်ပြီး format အသစ်တခုပြောင်းပစ်တာ စတဲ့အရာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ အရေးကြီးတာက data modeling ကို သေချာလုပ်မှသာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဒေတာတွေ တသမတ်တည်းဖြစ်ပြီး တိကျမှန်ကန်နေမယ်။ဘာလို့လည်းဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ analyze စလုပ်တဲ့အခါမှာ မတိကျမရေရာ၊တသမတ်တည်း ဖြစ်မနေတဲ့ ဒေတာ(inaccurate and inconsistent data)တွေက result အမှားတွေ ဖြစ်အောင် လမ်းလွဲသွားစေနိုင်လို့ပါ။
Data modeling လုပ်တဲ့ နည်းစနစ်တွေနဲ့ data model အမျိုးအစားတွေကလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။
ဒီအတန်းမှာတော့ အားလုံးကို ခြုံငုံမိအောင် သင်ပေးဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီတပတ် သင်ခန်းစာဗီဒီယိုတွေမှာတော့ Power BIနဲ့ ပတ်သတ်လို့ data modeling အကြောင်း လေးလေးနက်နက် ဆွေးနွေးကြည့်ကြပါမယ်။
ဒေတာတွေကို model ဆောက်ပြီးရင် visualize လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Data visualization ဆိုတာ ဒေတာတွေကို ဂရပ်တွေနဲ့ ကိုယ်စားပြုဖော်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ နေ့စဥ် ဘဝမှာလည်း မြင်ရပါမယ်။
ဥပမာ- သတင်းစာ၊မဂ္ဂဇင်း ဆောင်းပါးတွေမှာ တိုင်းပြည်ရဲ့ စီးပွားရေး အခြေအနေတွေ၊ အချိန်နဲ့ လိုက်ပြီး ပြောင်းနေတဲ့ စတော့ရှယ်ယာစျေး အတက်အကျတွေ၊အားကစား ကလပ်အသင်းရဲ့ အောင်မြင်မှု၊ရှုံးနိမ့်မှုတွေ (သို့) ကျွန်တော်တို့ အလုပ်ရဲ့ deadline မရောက်ခင် အချိန် ဘယ်လောက်ကျန်သလဲဆိုတာကို ပြတာမျိုးတွေပေါ့။
တကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ ဆရာတွေ၊စာရေးဆရာမတွေ၊ဂျာနယ်လစ်တွေ၊အင်ဂျင်နီယာတွေ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အမျိုးစုံဟာ chart တွေ၊infographics တွေကို သုံးပြီး ဒေတာတွေကို visualization လုပ်ကြလေ့ရှိပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုရင် ဒီနည်းက ဒီဒေတာတွေထဲမှာ ဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာ ဘာသာပြန်ကြည့်ဖို့ လွယ်ကူတဲ့နည်းမို့ပါ။
ဆယ့်နှစ်လတာ ကာလအတွင်းမှာ တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာတဲ့ ဂဏန်းတွေချည်းပါတဲ့ table တခုကို ကြည့်တာနဲ့ ၊ ဒီဂဏန်းတွေကို chart တခုပေါ်တင်ကြည့်ပြီး မြင်လာရတဲ့ trend တွေကို သဘောပေါက်လာတာ နှစ်ခုကို ယှဥ်ကြည့်ရင် ဘယ်အရာက ပိုလွယ်ကူမလဲဆိုတာ လူတိုင်း နားလည်နိုင်ပါတယ်။
Power BI ဟာ ဒေတာတွေကို database၊ spreadsheet၊ text file လိုမျိုး data source တွေ(သို့) ဝက်ဆိုဒ်စာမျက်နှာတွေနဲ့ ချိတ်ဆက် ယူလို့ရပြီး data model ထဲကို ထည့်သွင်းမှု(loading) လုပ်ပါတယ်။
Data model တွေကမှတဆင့် data visualization တွေဆက်လက် တည်ဆောက်တယ်။
ဒီ process မှာ အလုပ်လုပ်ပေးတဲ့ core tool ကတော့ Power BI Desktop ဖြစ်ပါတယ်။
Power BI Desktop ဟာ Window စက်ထဲကို ထည့်သွင်းနိုင်တဲ့ အခမဲ့ desktop application တခုဖြစ်ပြီးတော့ Power BI မှာ data modelတွေ၊reportတွေကို ဖန်တီးဖို့ရာအတွက် အဓိက toolတခုလည်း ဖြစ်တာပေါ့။
Power BI Desktopမှတဆင့် ကျွန်တော်တို့တွေဟာ PBIX ဆိုတဲ့ file extension အနေနဲ့ report တွေကို မိမိတို့ hard drive ထဲမှာ သိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။
Power BI developer တွေက ဒီလို စက်ထဲမှာ locally ထည့်သိမ်းတဲ့ report တွေကို PBIX ဖိုင်တွေလို့လည်း ရည်ညွှန်းခေါ်ဆိုလေ့ရှိတယ်။
ဒီအတန်းမှာလည်း report တွေကို PBIX ဖိုင်တွေအနေနဲ့ hard drive ပေါ်မှာ သိမ်းဖို့ လုပ်ကြပါမယ်။
တချို့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေမှာတော့ ကျောင်းသားတွေအတွက် ကျွန်တော် ကြိုပြီး လုပ်ပေးထားတဲ့ PBIX ဖိုင်ကို ဖွင့်ပြီး တခြား အပိုင်းတွေ လုပ်ကြပါမယ်။
Power BI desktop ထဲမှာ Power Query လို့ခေါ်တဲ့ အခြား application တခုလည်း ရှိပါတယ်။
Power Query ထဲမှာ data source တွေကို တခု(သို့)တခုထက်ပိုပြီး ချိတ်ဆက်တာ၊ data model တည်ဆောက်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ဒေတာပြင်ဆင်မှုအဆင့်အားလုံးကို လုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။
ဒီလို ပြင်ဆင်မှုအပိုင်း ပြီးသွားရင် Power Query ထဲမှာ ဒေတာတွေကို ဆွဲထုတ်ယူတာ၊ဒေတာပြင်ဆင်မှု အဆင့်ဆင့်ကို အသုံးပြုပြီး processလုပ်တာနဲ့ final data model ကို စတင်အသုံးပြု(load)လို့ ရပါပြီ။
ဒီ data model ကို x-velocity in-memory analysis engine လို့ခေါ်တဲ့ tool ထဲမှာ သိမ်းဆည်းပေးတယ်။
အတိုကောက်အနေနဲ့ x-velocity engine လို့ပဲ ကျွန်တော်တို့ ခေါ်ကြတာ‌ပေါ့။
x-velocity engine ဟာ data model ကို သိုလှောင်ဖို့နဲ့ ဒေတာတွေကို မူလအရွယ်အစားရဲ့ အပိုင်းတခုအထိ လျှော့ချဖို့ compress လုပ်ပေးတဲ့ Power BIထဲက database တခုပါပဲ။
ဒီအချက်ကြောင့် Power BIထဲမှာ ဒေတာ row ပေါင်း သန်းနဲ့ချီရှိတဲ့ data model အကြီးကြီးတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်နိုင်တာအပြင် ဒီဒေတာတွေနဲ့ တွက်ချက်မှုပေါင်းများစွာ လုပ်တဲ့အခါ performance အားသာချက်တွေ အများကြီး ရစေပါတယ်။
x-velocity engine ကို မျက်စိနဲ့တော့ မမြင်နိုင်ပေမယ့်၊ Power BIထဲမှာ အရေးပါတဲ့ အပိုင်းတခုဆိုတာ နားလည်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Data model ထဲမှာ ဒေတာတွေကို လုံခြုံမှုရှိရှိ သိမ်းဖို့နဲ့ compressလုပ်နိုင်တာနဲ့အတူ၊ဒေတာတွေက တဆင့် story telling လုပ်ရာမှာ ကူညီနိုင်ဖို့ chart၊ table၊ map နဲ့ အခြား content တွေ အားလုံး အပါအဝင် data visualization တွေတည်ဆောက်ကြဖို့ Power BI Desktop ထဲမှာ Report Editor ကို ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဒီအတန်းထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အချိန် အများစုကို Power BI Desktop Report Editor ထဲမှာ နှစ်မြုပ်ထားကြမယ်နော်။ သူနဲ့ Power Query အကြားမှာ အပြန်အလှန် ဟိုဖက်ဝင်၊ဒီဖက်ထွက်တွေကတော့ data model တွေကို ဆောက်နေစဥ်၊အသုံးပြုနေစဥ်မှာ ရှိပါလိမ့်မယ်။
Power BI Desktop အပြင် ကျွန်တော်တို့ ထပ်မံရှာဖွေ အသုံးပြုလို့ ရနိုင်တဲ့ အခြား စွမ်းဆောင်ချက်တွေများစွာလည်း Power BI နဲ့ပတ်သတ်လို့ ရှိပါသေးတယ်။
Report တွေကို ဖန်တီးလိုက်နိုင်တာအပြင် နောက်ထပ် အရေးအပါဆုံး feature က ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ ရှိတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ sharing လုပ်ဖို့ (သို့) app တွေ၊website တွေကနေတဆင့် embed လုပ်ပြီး report တွေကို ဝေမျှနိုင်ဖို့ပါပဲ။
အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်မှု ကြီးကြီးမားမား ပြနိုင်တဲ့ data visualization တွေကို ကိုယ်တဦးတည်းကြည့်ပြီး ဒီနေ့ခေတ်မှာ ဘာများကောင်းနိုင်မှာပါလဲ။
သေချာလုပ်ထားပြီးတဲ့ ဒီ report တွေကို sharingလုပ်ဖို့ Microsoft က hosting အတွက် platform နှစ်ခုကို မိတ်ဆက်ထားပါတယ်။
ဒီနှစ်ခုထဲမှာ အကြီးဆုံးကတော့ Power BI service ဖြစ်ပြီးတော့ powerbi.com ကနေတဆင့် ဝင်ရောက် အသုံပြုနိုင်တဲ့ Software asaService(SaaS) portal တခုပါ။
Power BI service ဟာMicrosoft ကနေ ပိုင်ဆိုင်ပြီး၊စီမံခန့်ခွဲနေတဲ့ cloud application တခုမို့ report တွေကို သိမ်းတာ၊run တာတွေအတွက် သူ့ရဲ့ infrastructure ကို ယူသုံးရတဲ့ သဘောဆောင်ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီ(သို့)ကျောင်း email address တွေကို သုံးပြီး အကောင့်ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။
Power BI service သုံးဖို့ အကောင့်ဖွင့်ပြီးပြီဆိုရင် အလုပ်လုပ်ထားတဲ့ PBIX ဖိုင်တွေကို upload တင်လို့လည်း ရသလို၊ Power BI Desktop ကနေ တဆင့်လည်း တိုက်ရိုက် publish လုပ်ပြီး တင်နိုင်ပါတယ်။
ဒီကမှ တဆင့် Power BI service ကို access လုပ်နိုင်တဲ့ မိမိရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ report တွေကို အလွယ်တကူ ဝေမျှကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Report တွေကို public ချပြဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ web feature ကို အသုံးပြုပြီး blogတို့၊website တို့မှာ sharing လုပ်လို့လည်း ရပါသေးတယ်။
Power BI Service အကြောင်းကို အတန်းပြီးဆုံးခါနီးမှာလည်း အသေးစိတ် ဆက်လေ့လာကြပါမယ်။
Report တွေကို sharign လုပ်ဖို့အတွက် ဒုတိယ platform ကတော့ Power BI Report Server ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ တိမ်(cloud)ပေါ်မှာ သွားသိမ်းမယ့်အစား မိမိတို့ အလုပ်(သို့_ကျောင်းရဲ့ ပရဝုဏ်အတွင်းမှာပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင် infrastructure နဲ့ host လုပ်နိုင်တဲ့ application အမျိုးအစားမို့ ကုန်ကျစရိတ်က ကနဦးမှာ များနိုင်ပေမယ့် ရေရှည်အတွက် ကောင်းပါတယ်။
သို့သော် ကောင်းခြင်း၊ဆိုးခြင်းဆိုတာဟာ ဒွန်တွဲနေတတ်တာမို့ Report Server ဟာ မိမိတို့ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ firewall နောက်မှာ တည်ရှိနေတဲ့အတွက် အလွယ်တကူ accessible လုပ်ယူ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ service တခုတော့ မဟုတ်တော့ ပြန်ဘူး။
Report service က Power BI Service လောက် feature တွေ အများကြီး မရှိသော်လည်း ကိုယ့်ရဲ့ ကုမ္ပဏီ(သို့)ကျောင်းမှာ သူ့ကို ထောက်ပံ့နိုင်တဲ့ infrastructure ရှိရင် Power BI report တွေကို host လုပ်ပေးဖို့ရာ စျေးနှုန်း သက်သာတဲ့ နည်းလမ်းတခုမို့ သူ့ကိုလည်း မေ့မထားသင့်ပါဘူး။
Power BI Repert Server အကြောင်း ဒီအတန်းမှာ အများကြီး ထည့်မပြောပေမယ့် သူကလည်း အရေးပါတဲ့ အရာတခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့ မှတ်ထားစေလိုပါတယ်။
နောက်ဆုံးတခုကတော့ Power BI Service/Report Serverတို့လိုပဲ ဖုန်းတွေ၊mobile device တွေက တဆင့် report တွေကို ရယူနိုင်တဲ့ Power BI mobile appဖြစ်ပါတယ်။
Report တွေကို mobile layout မှာ ထည့်ပြီး develop လုပ်ဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်၊ဒါကိုလည်း ဒီအတန်းထဲမှာ ဘယ်လိုလုပ်ရသလဲဆိုတာ ကျွန်တော်ပြပါမယ်။
ပြောခဲ့တာတွေကို ပြန်လည်ကောက်နှုတ်ရရင် Power BI Desktopနဲ့ Power Query, Power BI service, Power BI Report Server နဲ့ Power BI mobile app တွေအကြောင်း လေ့လာသူတို့ကို ကျွန်တော် မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီ အတန်းကတော့ Power BI Desktop တခုကိုပဲ အခြေပြုပြီး သင်သွားပါမယ်။
Power BI service နဲ့ Power BI mobile app အပြင် Power BI Reprot Server တိုအကြောင်းကိုလည်း ဒီအတန်းရဲ့ နောက်ပိုင်းနားမှာ အသေးစိတ်လေး ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားပါမယ်။
သို့သော်လည်း ကျွန်တော်တို့တွေ Power BI Desktop အထဲမှာပဲ data model တွေဆောက်တာနဲ့ report တွေ ထုတ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ skillတွေ ရရှိအောင် အကြိုးတကုတ်လုပ်ကြရအောင်။
ဒါက Power BIရဲ့ အရေးအကြီးတကာ့ အကြီးဆုံး အပိုင်းဖြစ်နေလို့ပါ။